hadda - Lulu.com
Search Results: 'hadda'
4 results for "hadda"
Qormo lagu kala baxay oo ku Saabsan Farshaxanka Cishqiga lagu Helo By Samatalis Xayle
Akhbaarta aan meeshaan ku soo qoray waa mid aan ka helay waayo aragnimo dheer oo saldhigatay odoros iyo ku shaqayn wixii la odorsay; marka ka macaash arintaan. Waxaan kuu rajaynaayaa wanaag. Digniin:... More > jaribidda waxa meeshaan ku qoran waxaad ku jarribaysaa jeebkaaga; wixii ka soo gaara shaqadayda ma aha. Sida anigaba dhibka iyo wanaagga iga soo gaaray ay tahay arin aniga ii taala; walow la dhihi karo, adna hadda sida muuqata waxaa laga yabaa inaad ka macaashtid waxaan meeshaan ku soo qoray; inay dhibaato ka soo gaartana ma aha mid meesha ka maran.Qof walbow naftaa, Nabiyow, NNKHA, Ummaddaa.< Less
Hal-bixinta Ereyada Kumbuyuutarka By Cabdiraxmaan C. Faarax "Barwaaqo"
Buuggani wuxuu awood inoo siinayaa inaynu af Soomaali ku baran karro kagana hadli karro Kumbuyuutarka iyo wixii la xidhiidha, kaasoo ay markii hore adkayd in af Soomaali lagaga hadli karo. ... More > Waxa kale oo uu awood inoo siinayaa inaynu markii u horreysey yeelanno furahayeenno af Soomaali ku qoran, iyo weliba inaan si hawl yar u soo hal-tebsan karro qormayaasha kala duwan ee kumbuyuutarka hadda lagu adeegsado.< Less